Kusukela kwesobunxele: U-Advocate Dali Mpofu, uMhlonishwa Chile Igbawua, uMnu Werner-Amon noMnu Leonard Ngaluma.
Ukugubha iNyanga yoMvikeli woMphakathi, nokwazisa ngesikhungu soMvikeli woMphakathi, i-African Ombudsman Research Centre (i-AORC) ibe nengxoxo yamahora amabili ukudingida izingozi nezinselelo ezibhekene nesikhungo se-Ombudsman e-Afrika nohlelo lwe-International Ombudsman Institute (i-IOI) lokweseka i-Ombudsman esengozini.
Umphathi wohlelo bekunguMhlonishwa Chille Wagner Igbawua, uMvikeli woMphakathi waseNigeria, kanti ezikhulumini bekukhona u-Advocate John Walters, uMvikeli woMphakathi waseNamibia; u-Advocate Dali Mpofu waseNingizimu Afrika; noMnu Leonard Ngaluma, isikhulu esiphezulu eHhovisi loMvikeli woMphakathi eKenya. Kwethulwe nenkulumo eqoshiwe kaMnu Werner Amon, uNobhala Jikelele we-IOI nonguMvikeli woMphakathi wase-Austria.
USolwazi Brian McArthur, iPhini LeSekelaShansela kanye neNhloko yeKolishi leziFundo Zomthetho kanye nezokuPhatha e-UKZN, wemukele izihambeli egameni leNyuvesi nelika-Advocate Busisiwe Mkhwebane, uMvikeli woMphakathi eNingizimu Afrika noMengameli we-African Ombudsman and Mediators Association (i-AOMA) noSihlalo weBhodi ye-AORC Board wabemukela egameni lalezi zinhlangano.
Inkulumo ka-Walter ibuze umbuzo omqoka nonzima othi: “Ngubani ovikela uMvikeli?” Inkulumo yakhe igxile kuloko okungaba yizaba zokuqala nezesibili lokuvikela. Ugcizelele ukuthi uMvikeli woMphakathi kudingeka azivikele ngokuthi akhohlwe yizidingo zakhe futhi abonakale engachemile. Igama lakhe kufanele lingabi nagcobo nokuthi kufanele abonakale ezimele “akuphile” loko kuzimela.
UNgaluma ugxile ezintweni ezine ezimqoka nokuthi zixhumana kanjani nesikhungo soMvikeli woMphakathi kanti lezo zinto ukungaphenduli, wukubuyelwa yizinduku, ukweswela izinziza zokusebenza nesidingo sokuthi ihhovisi loMvikeli woMphakathi lifake isiko lokuphatha kahle e-Afrika. Mayelana nokuncipha kwesabelo-mali, uphakamise ‘ukuzama ngendlela ehlelekile imali yabaxhasi kodwa kuqikelelwe ukuzimela kwehhovisi loMvikeli woMphakathi’.
U-Mpofu ubeke izingozi ezihambisana nalo msebenzi nezihlale zikhona. Uthe ihhovisi loMvikeli woMphakathi kufanele livikelwe ngendlela efanayo njengehhovisi leJaji. Ugcizelele ukuthi ukuxhumana koMvikeli woMphakathi nomphakathi emazingeni aphansi kumqoka kakhulu ukuze umphakathi ubone isidingo saleli hhovisi futhi uzoba nendaba ekutheni liphumelele. Ngaleyo ndlela, umphakathi uzovikela uMvikeli woMphakathi.
U-Amon uthe ukusiza uMvikeli woMphakathi osengozini sekungenye yezinjongo ezinkulu ze-IOI muva nje. I-IOI ibuka ingozi njenganoma yisiphi isenzo esingabeka umsebenzi walesi sikhungo soMvikeli woMphakathi engozini. Uchaze izingozi ezihlukene nezindlela i-IOI engalekelela ngazo. U-Amon uphethe ngokukhuthaza bonke akade bekhona ukuthi bathinte i-IOI uma kukhona abakusolayo okuyingozi esikhungweni sabo noma kwesinye isikhungo soMvikeli woMphakathi.
Amagama: ngu-Ngomu Franky Lwelela